Gịnị kpatara ọtụtụ ndị nrụpụta PCB ji bulie ọnụego ya n’afọ 2021?
Gịnị kpatara ọtụtụ ndị nrụpụta PCB ji bulie ọnụego ya n’afọ 2021? —— Ihe mere PCB ji bulie ego. Isi: Na 2021, akụ na ụba ụwa enwetawo nsogbu a na-enwetụbeghị ụdị ya ...
PCB mmepụta mmepụta ụwa na-akpali ọwụwa anyanwụ
Apple si aga na nkà na ụzụ innovations emewo ka nnukwu ohere maka nhazigharị PCB ụlọ ọrụ yinye. IPhone 8 ga-yikarịrị iwebata teknụzụ ọhụrụ dị ka bọọdụ ụgbọelu, si otú a na-emepe ọhụụ ọhụrụ nke mgbanwe motherboard. Nhazi usoro nhazi gha ghachi azu ...
Kaisheng mere Nzukọ Ndị Na - ebunye 2016 - ihe ịga nke ọma zuru oke
“Mmeri imekọ ihe ọnụ na-abara ụwa uru” bụ isi nkuku nke njikwa sistemụ Kaisheng. "Passzọ gafere onye iro dị ka mgbidi igwe, mana ya na agbago, anyị na-emeri nzukọ ya". Na oge nke ịhapụ ochie na anabata ndị ọhụrụ na 2016, anyị ...
Mmepụta IC na ọnwa ise mbụ nke 2017 mụbara site na 25.1% kwa afọ
Dị ka ọrụ nke electronic ọmụma n'ichepụta ụlọ ọrụ si Jenụwarị na May nke 2017 wepụtara site Ministry of Industry na Information Technology, mmepụta nke electronic components ụlọ ọrụ nọgidere na-enwe a otu ebe na-eto, nke ike na sekit na sekit inc ...
Ekele diri KAISHENG maka inye onyinye “AAA Ebe E Si Nweta Enterprise”
Na June 21, 2019, akara kredit nke SHENZHEN KAISHENG PCB CO., AKA LIMITED gosiri AAA site na Enterlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Enterlọ Ọrụ nke China.
Nyocha nke asọmpi asọmpi nke ụlọ ọrụ ndị na-arụ ọrụ na China na 2016
N'ịbụ nke nwere nrụgide asọmpi zuru ụwa ọnụ na mgbanwe ngwa ngwa na teknụzụ, ụlọ ọrụ ndị na-arụ ọrụ na China na-agba ọsọ ọsọ iji gbalịsie ike maka ọkwa dị elu na rụzuru. E biri ebi circuit iba emepụta na mpaghara isii gụnyere China, Taiwan, Japa ...
Ihe ịma aka 5G na teknụzụ PCB
Kemgbe 2010, uto uto nke uru PCB na-emepụtaghị uru n'ozuzu ya ajụla. N'otu aka, teknụzụ ọhụụ ọhụụ na-eme ngwa ngwa na-aga n'ihu na-enwe ikike nrụpụta dị ala. A na-eji nwayọọ nwayọọ dochie ogwe abụọ na ogwe aka abụọ bụrụbu nke mbụ na ọnụahịa mmepụta ...